Translate casea( hp vs sp ) in Burmese with examples
Results for casea( hp vs sp ) translation from English to Burmese
ဟောင်ကောင်က သံသယဖြစ်ဖွယ် လူနာများကို အိမ်တွင် နေထိုင်စေသော စနစ်ကို ထူထောင်ခဲ့ပြီ “အရေးပေါ် ဌာနက လူနာအား တစ်ရှူးနမူနာ ဖန်ပြွန်ကို လူနာအား ပေးလိမ့်မည်” သူတို့က ထိုအထဲသို့ တံတွေးထွေးထည့်ပြီး ပြန်ပို့ကာ ရလာဒ်မှာ သိပ်မကြာမီ သိရသည်။ ဗြိတိန် NHS က အိမ်တွင် သံသယလူနာများကို စမ်းသပ်ခြင်း ပုံစံမှာ ရှေ့ဦးစမ်းသပ်မှု ဖြစ်သည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ယင်းတွင် လူနာက အကယ်၍ ဆေးရုံသို့ လာရောက်ပါက အခြားသူများကို ကူးစက်နိုင်သည့် အလားအလာနှင့် လူနာတင်ကားကို အသုံးပြုပါက ပိုးသတ်ရခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ COVID-19 သံသယ လူနာများအတွက် ကားမောင်းဝင်ရောက် စမ်းသပ်သည့် ပုံစံတွင် ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များသည် သင့်လျော်သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို နမူနာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Hazard controls for this group, in addition to basic infection prevention measures, include ventilation using high-efficiency air filters, sneeze guards, and having personal protective equipment available in caseaperson with COVID-19 is encountered.
အခြေခံ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်မှုများ အပြင် ဤအုပ်စုအတွက် ဘေးအန္တရာယ် ထိန်းချုပ်မှုများတွင် ထိရောက်မှု မြင့်မားသော လေစစ်များသုံးသည့် လေဝင်လေထွက်၊ နှာချေခြင်း အကာအကွယ်များ၊ နှင့် အကယ်၍ COVID-19 ရှိသော လူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် ဆက်ဆံရန် လိုအပ်ပါက တကိုယ်ရည်သုံး ကာကွယ်မှု ပစ္စည်းများရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
send me your nude pic of your full body (English>Portuguese)alhamdulillah (English>Russian)what is there at the gallery? the gallery (English>Portuguese)palagi kang ganyan (Tagalog>English)pagsasadula ng unang pasko 11 letters (English>Tagalog)pagmamano sa nakakatanda sa kanila (Tagalog>English)portamus (French>English)he mory (Serbian>German)ipamulat na ang kanilang ginagawa ay nakakairita (Tagalog>English)apa maksud staged (English>Malay)my biggest mistake (English>Tagalog)correlation coefficient (English>Malay)raid (Estonian>English)wala (Tagalog>Spanish)piravi palan (Tamil>English)please notice me when it (English>Tagalog)masakit ang balikat (Tagalog>Spanish)memory of my town by jose rizal (English>Tagalog)ευτράπελα (Greek>English)популярност (Bulgarian>Korean)when will you come home (English>Tagalog)choti soch (Hindi>English)sobrang init pinagpawisan na ako (Tagalog>English)slogan ng batas trapiko (English>Tagalog)lethal (English>Malay)